Dhaga’aa wal dhageesisaa!!Osoo hidhaaf boochuu Qeerroo lama (2) ajjeefameera! - Kichuu
[ July 1, 2020 ] Rights Groups Call for Swift Response to Ethiopian Singer’s Death	World
[ July 1, 2020 ] ODUU Hatattama Jawar Abiy Jaal Marroo kuno itii dhiyadha	TV
HomeAfaan OromooNewsDhaga’aa wal dhageesisaa!!Osoo hidhaaf boochuu Qeerroo lama (2) ajjeefameera!
Dhaga’aa wal dhageesisaa!!
Osoo hidhaaf boochuu Qeerroo lama (2) ajjeefameera! 😭😭
Fuullee Hora finffinneeti waraanni Federaalaa Agaaziin Alabaa Abo qabattee maalif deemta jechuun miidhama guddaa kana fakkaatu Qeerroo Oromoo ayyaana kabajachuuf km hedduu qaxamuree deeme akkanatti reebicha hamaa irraan ga’uun Akka mana yaalaa hin geessineefis dhorkanii lafatti ilaalaa jiru. Alabaa isaan jibbaan kun Guyyaa boorii samiitti ol baatee nii mirmirfdamti. Yeroo kana waan isaan jedhan ilaalla. Qaamni dhimmi isaa ilaallatu dhimma kana irrati furmaata atatamaa hin kennu taanan dhimmi kun kallattii jijjiirrachuu danda’a. Share gochuun Qaama dhimmi isaa ilaallatu biraan ga’aa. Yeroo alaaban Oromoo akkanatti mullatu maalif akka garaan isaanii gubatu nuuf galuu dideera.
Boor Garuu yoona kana akkuma garaan keenya Gubate Garaan ishee akka gubatu shakkii hin qabu. #Adaraa Jawar Mohammed, Oromia Media Network fi Miidiyyaaleen Oromoo Qeerroo Oromiyaaf Sagalee ta’aa?
Guyyaa har’aa kutaalee Magaalaa Finfinnee iddoo gara garaatti Sababaa Alaabaa Oromiyaa (ABO) qabatan jadhan qofaaf Humni Tikaa Mootummaa Agaaziin Qeerroo Oromiyaa namni 81 ol hidhamaniiru!!!
Qeerroo Oromiyaa Ibsa Hatattamaa Baseera nu hordofaa yeroo muraasa booda niin maxxansa!!
Warri hidhame hatattamaan nu hiikamuu qaban! Alaabaa Oromiyaa akka Finfinne hin seenne dhoorkuun hatattamaan dhaabbachuu qaba!! Warra hidhameef Sagalee haa taanu!!
Jawar Mohammed, Oromia Media Network Miidiyyaaleen Oromoo Sagalee Qeerroo hidhamaniif ta’aa??
Haacaaluun kabajaan Oromoo akka biyyoolessatti godhameefii Finfineetti boqochuu qaba.